Ọzụzụ imepụta imepụta - Gaa! AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ (NHỌMỌDỤ SPECIALIZATION ỌKỤRỤ // FULL-Oge // BSO // CAMPUS RUGGEVELD)
ụdịdị dị iche iche School > Ihe ọmụmụ anyị > Afọ 7e maka iche iche > Mma ụlọ
Na 7e afọ iche iche imepụta imewe (oge zuru ezu / BSO) ị ga-enwetakwa ahụmịhe bara uru n'ihe gbasara ime ndokwa na imezi. N'ụlọ akwụkwọ anyị na n'oge nnyekọrịta zuru oke Ị na-amụta iji onwe gị atụle ọnọdụ ọnọdụ (dịka kichin na ihe ọ bụla), ese onyinyo, ese, rụọ nhazi na ntinye ego, CAD / CAM / CNL ma mechaa nhazi dịka iwu nke nkà. Ị na-arụ ọrụ karịsịa site na osisi kamakwa ntinye nke ụlọ ụlọ, plasta na kaadiboodu mgbidi ... bụ akụkụ nke ya. Ị mụtara otú ị ga-esi melite, rụọ ọrụ ma jikwa ígwè ọrụ nhazi.
Ịnwere ike ịbanye naanị afọ 7 ma ọ bụrụ na ị nwetalarị akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Echere, ị natara ọzụzụ n'ọhịa osisi
Ọ bụrụ na ị gafee usoro a ị ga-enweta ya diplọma nke mmụta sekọndrị ma ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ ma ọ bụ nọgide na-amụ ihe. Ọrụ ndị nwere ike ịnweta bụ ndị na-arụ ọrụ na omenala, ndị na-arụ ọrụ n'ime ụlọ, ndị na-arụ ọrụ n'ime ụlọ, ihe ntanetị na ihe ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ. I nwekwara ike ịga n'ihu na-amụ ihe. Mmụta kachasị elu (se-n-se, HBO, ọkachamara ọkachamara) n'ime ịdọ aka ná ntị bụ n'ezie n'etiti ndị nwere ike ime. Enwere ike ịchọta ozi ọzọ ebe a.